Hay'addo ammaanay doorashada - BBC Somali
Hay'addo ammaanay doorashada
Saddex hay'adood oo caalami ah ayaa ammaanay doorashada Somaliland.
Hay'adahaasi waxay sheegeen in tan iyo markii uu bilawday ololaha doorashadu horraantii bishan aanay jirin wax cabasho ah oo weyn ama iskudhac ah oo dhexamray xisbiyada loollamaya.
Hay'aduhu waxay sheegeen inuu si fiican u dhaqan galay heshiiskii ay xisbiyadu ku gaareen in mid waliba maalintiisa qabsado isu-soo baxa siyaasadeed.
Xagga nabadgelyada, waxay sheegeen hay'aduhu in hal askari uu ku dhintay dhacdo lagu sheegay inay ku lug lahaayeen islaamiyiin siyaasiyiin ah magaalada Burco. waxay sheegeen in dhacdadaasi ay bixinayso farriin ah in la doonayo in doorashada fadqalalo laga rido.
Hase yeeshee waxay sheegeen hay'aduhu in police-ka iyo dadweynaha Somaliland ay muujiyeen sida diyaarka ay u yihiin. waxay kaloo sheegeen in ilaa 70 goobjoogayaal caalami ah oo ka kala imanaya dalal kala duwan ay goobaha codbixinta goobjoog ka noqon doonaan. waxay kaloo sheegeen inay jiri doonaan 800 oo goobjoogayaal degaanka ka tirsan.